PressReader - Ilanga: 2017-10-05 - KUBALUKEKILE UKUKHONGOZELA AMANNZI NGESIKHATHI SEZIMVULA
KUBALUKEKILE UKUKHONGOZELA AMANNZI NGESIKHATHI SEZIMVULA
Ilanga - 2017-10-05 - Imibond - SICELO KUNENE
SESIFIKILE futhi leso sikhathi esilangazelelwa yibona bonke abalimi, okungesezimvula ngoba yiwona la manzi ayimpilo kubantu nasezitshalweni.
Kuthiwa imizimba yethu ibunjwe yaphaswa ngamanzi ngezingxenye eziyisi-7 kwezili-10 noma ngama-70% kanti ezitshalweni kulinganiselwa ema-95%.
Yisona sizathu esenza silokhu sigcizelela ngezindlela zokukhongozela amanzi ngezikhathi zemvula, ukuwonga ngokuwagcina ezinqolobaneni zemvelo nezakhiwe nokukhuthaza ukwenzeka komswakama emasimini ngoku- mboza ngamabibi nangezitshalo ezenabayo.
Yingakho kule minyaka emibili edlule besilokhu sigcizelela ukwenziwa kwamakhontolo okubamba amanzi emvula angagijimi masinyane nokusetshenziswa kwamabibi nezibola emasimini ukumboza umhlabathi ngoba ngaleyo ndlela umswakama kawuhwamukiswa yilanga nemimoya.
Ziningi izindlela zokuvuna nokunqoloba amanzi, sizokhumbuza umlimi ngezimbalwa ezijwayelekile. Izinqolobane zamanzi ziyahluka kuye ngama- ndla omlimi. Indlela ejwayelekile ngeyokufaka ogadasi endlini bese amanzi engena ethangini elimi eceleni kwendlu.
Uma ngizicabangela nje, ngibona kumele kube yicala ukwakha indlu engenawo ugadasi oqoqa amanzi emvula ophahleni lwendlu.
Noma ngabe indlu isesabelweni noma esilungwini, isikhathi esiphila kusona kasisavumi ukuba sibe budedengu ngamanzi. Kwesinye isikhathi amanzi aqoqelwa emiphongolweni lapho evela ngqo emvuleni noma akhi-
we emifuleni emuva kwezimvula ezinkulu.
La manzi aqoqelwe emphongolweni, kumqoka ukuba kuqikelelwe ukuthi kawangenwa yizilwane ezibeka amaqanda emanzini ngoba lokho kungawenza angabe esabamsulwa su.
Enye indlela yokunqoloba amanzi ngeyokufaka amapayipi aqoqa wonke amanzi emvula lapho angase aqoqeke khona bese engena emapayipini ambelwe, awahambisa aze ayongena enqolobaneni eyakhelwe ngaphansi koMhlaba. Sebenzisa amanzi ngobunono nokuqikelela. Kulula ukuzibona sewunisela izitshalo sonke isikhathi ngoba nje wazi ukuthi unamanzi ayinala.
Kwesinye isikhathi uzobona sengathi umhlabathi womile uma ubheka nje ngaphezulu kanti amanzi noma umswakama kuningi, kubambelele ngaphansi koqweqwe olungaphezulu lomhlabathi.
Lokhu kubambeka komswakama kuvame ukwenzeka emhlabathini osunesigubu esihle, kodwa nalowo ocinene kakhulu uyawubamba, umehluko kuba wukuthi lo ocinene kakhulu kawuniki izimpande ithuba elanele lokuthubeleza kahle emhlabathini, ukuze zigxile phansi zize zifike emanzini azinzile. Konke esikwenzayo emasimini makuncike ezinhlosweni nasezindleleni ezonga amanzi nomswakama.
Masidlulise ukubonga laba balimi abebezofunda nathi ngosuku lwamasiko, sibafisela impumelelo emasimini nonyaka.
Ungathintana nathi kwethi: 082 789 4281 noma ngokuxhuma ikheli elithi www.sicelokunene.co.za, ekhasini elithi: Contact us.